Otu esi etinye PHP ImageMagick (IMAGICK) na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
October 2, 2021 by Jọshụa James
Wụnye PHP-IMAGICK sitere na Debian 11 Bullseye Repository
Wụnye PHP-IMAGICK sitere na ebe nchekwa PHP nke Ondřej Surý
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye PHP ImageMagick (IMAGICK) na Debian 11 Bullseye.
Mara, gaa na ntuziaka anyị Otu esi etinye ImageMagick na Debian 11 Bullseye ọ bụrụ na ị chọrọ ịwụnye ImageMagick software.
Ị nwere nhọrọ abụọ maka nwụnye. Otu bụ ebe nchekwa Debian ndabara ma ọ bụ tinye ya na PPA site na Ondřej Surý. Nkuzi a ga-ekpuchi nhọrọ abụọ a, ma ị nwere ike ikpebi nke ị ga-ahọrọ.
Nhọrọ nke mbụ bụ iji ụlọ ọrụ nchekwa Debian 11, nke a bụ otu n'ime nhọrọ kachasị amasị yana ịrụ ụka na ọ kacha kwụsie ike. Naanị ihe ndọghachi azụ ga-abụ ihe mgbe ochie maka ụlọ ọhụrụ na ndozi ya tụnyere nhọrọ abụọ ndị ọzọ.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike iji ụdị kachasị amasị dịka 7.:
Nhọrọ nrụnye nke abụọ ma akwadoro ịwụnye ebe nchekwa PHP site na Ondřej Surý. Maka ndị na-amaghị, Ondřej Surý bụ onye na-elekọta PHP na Debian ma na-emelite PPA a mgbe niile site na iji ụdị PHP kachasị ọhụrụ ewepụtara.
Tupu ịga n'ihu, megharịa ndepụta nchekwa gị iji mee ka ebe nchekwa ọhụrụ na-arụkọ ọrụ.
Ugbu a, ị nwere ike iwunye php-imagick site na ebe nchekwa ọhụrụ:
The php.ini n'ihi na Apache sava weebụ dị na /etc/php/7.4/apache2/php.ini. Dochie ụdị nrụpụta (7.4) ma ọ bụrụ na ị na-eji, ọmụmaatụ, 8.0, 7.3, 7.2.
Iji mechaa, malitegharịa Apache:
N'ịpịgharị na ibe ahụ, ị ​​nwekwara ike ịhụ ụdị nrụpụta na ozi na ụdị gị php-imagick ndozi.
Ị mụtala otu esi etinye php-imagick site na iji ebe nchekwa ndabere Debian ma ọ bụ nke Ondřej Surý. N'ozuzu, n'ime ọtụtụ nhọrọ maka ntughari onyonyo nke PHP nwere ike iji, nke a bụ nhọrọ kachasị eji na akwadoro ma e jiri ya tụnyere nhọrọ ndị ọzọ dị ka. GD, karịsịa maka WordPress Sava webụ, ka ọ na-emepụta onyogho dị nkọ na nke dị elu.